Sukuba nexhala kwiVilla Sea yonwabile-Intliziyo uManuel Antonio
Quepos, Costa Rica, Provincia de Puntarenas, Costa Rica
Indawo yeNdawo! Le yindawo yokuhlala yabucala yezindlu ezi-4 ezibekwe kanye phakathi kwepaki yesizwe kaManuel Antonio kunye nedolophu yaseQuepos. Yimizuzu emi-3 ukuya kweyesi-4 ukuya kuyo. Iphezu kwenduli entle enobungakanani kwaye kukho iimbono ezininzi zolwandle kwipropathi. Kukho indawo yokumisa iibhasi zikawonke-wonke ngaphesheya kwesitrato esinokuthi sikuse kwipaki yesizwe yaseManuel Antonio kunye nolwandle ngexabiso eliphantsi ukuba awufuni kuqhuba, kwaye kukho iitoni zezindlu zekofu kunye neeresityu kumgama wokuhamba!
Olu luhlu lwenzelwe i-villa uLwandle olonwabileyo. ULwandle onwabile yindlu enebali elinye enegumbi elinye lokulala kunye nesofa yokukhupha. Ukuba ufuna ukulala ngakumbi singafumana umatrasi onokuvutheka kwigumbi lokuhlala ngokunjalo. Kukho iveranda engaphambili enombono omncinci wolwandle, kwaye ipropathi ibekwe kakuhle kakhulu kwaye kukho ichibi ekwabelwana ngalo kuzo zonke iipropathi. Kukho indawo yokupaka yabucala kwindawo phakathi koluntu olugayiweyo.
Bonisa zonke 73 izinto onokuzisebenzisa
4.96 · Izimvo eziyi-78
I-Seascape yindawo encinci yamasango ezindlu ezi-4 kanye phakathi kwepaki yesizwe kaManuel Antonio kunye nedolophu yaseQuepos. Kumalunga nemizuzu emi-3-4 ukuya nokuba ngemoto. Kukho nesikhululo sebhasi endleleni phambi kwepropathi, kwaye kukho iimbono ezintle ezivela kwiindawo ezahlukeneyo kwipropathi. Kukho iqula elihle ekwabelwana ngalo kwisiza ukuze kusetyenziswe izindlu, kwaye kukho umntu osebenza egadini osisigxina otyala iziqhamo ezahlukeneyo kwipropathi (ukuba iindwendwe zizonwabele) kwaye ugcine indawo icocekile. Zonke iipropathi eziseSeascape zizindlu zesitayile saseCosta Rican, nazo zonke izinto zale mihla zendlu yesitayile saseMelika! Ukuhlala apha kukunika ithemba lokwenyani leCosta Rica kufana, ngelixa usonwabela ubutofotofo onawo ekhaya!
UJose Serrano yi-concierge yendlu yeVilla Sea Happy kwaye uyafumaneka nanini na ukuhlangabezana nazo naziphi na iimfuno zakho. Iindwendwe ezininzi zimsa kwiivenkile ezithengisa ukutya phambi kokuba zifike apha, kwaye ukwanonxibelelwano oluninzi ngemisebenzi eyahlukeneyo kule ndawo. Uya kudibana nawe kwi-villa ngosuku lokuqala kunye nezitshixo, kwaye ngokuqhelekileyo uhlola amaxesha amaninzi ngexesha lokuhlala ukuze uqiniseke ukuba yonke into ilungile ngokuhlala kwakho!
UJose Serrano yi-concierge yendlu yeVilla Sea Happy kwaye uyafumaneka nanini na ukuhlangabezana nazo naziphi na iimfuno zakho. Iindwendwe ezininzi zimsa kwiivenkile ezithengisa uku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Quepos, Costa Rica